Manova Ny Endrik’Izao Tontolo Izao Hitovy Amin’ny Fanombohan’ny Game Of Thrones Ny Arzantiniana Iray Mpanao Sarimiaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2016 16:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, नेपाली, Español
Ity no endrika niheveran'ilay Arzantiniana, Damien Boso, ny tanibe niainga avy amin'ny endrika nampiasaina tanatin'ilay horonantsary malaza. Dikasary nalaina avy amin'ny lahatsary nozarain'ilay mpanao sarimiaina 3D ao amin'ny YouTube
Ankehitriny dia mifarana ny fizarana fahenin'ny Game of Thrones, ilay tantara mitohy malaza mandeha amin'ny fantson'ny fahitalavitra HBO, mifototra amin'ny tantara nosoratan'i George R. R. Martin, kanefa dia tsy mitsahatra manainga fanahy ireo mpankafy azy. Manana mpanaraka marobe manerana an'i Amerika Avaratra sy i Amerika Latina io fandaharana io, izay mitantara ny fiainan'ireo fianakaviana andriana ao anatin'ny tontolon'ny Taona Afovoany manao izay fara-heriny hahazoana fahefana sy hamongotra ny fahavalony. Na dia noforonin'ny saina aza izany, dia tsy sarotra ny mahita ireo fitoviana misy eo amin'ny tontolontsika sy ny tontolon'ny Game of Thrones, miaraka amin'ny hasarotry ny politika ary ireo mpandray anjara maha-te ho tia sy adaladala.
Iray amin'ireo mpankafy nahazo aingam-panahy noho io tantara mitohy io i Damian Bosio, Arzantiniana mpanao sarimiaina 3D, raha nahita voalohany indrindra ny fanolorana ilay sarimihetsika:
Nahita ilay fanolorana aho ka ny zavatra tonga tao an-tsaiko voalohany dia ny hanao dikan'io maneho ny fireneko (Arzantina). Natomboko tamin'ny tanànan'i Buenos Aires izany (tanàna fonenako) miaraka amin'ny hevitra ny hanitatra azy.
Ny faharoa dia ny renivohitr'i Buenos Aires sy ireo tanàn-dehibeny.
…avy eo Arzantina manontolo.
Saika hofaranako teo izany saingy nanapa-kevitra ny hanitatra bebe kokoa aho. Ny fahefatra dia ny dika nataoko ho an'i Amerika Atsimo.
Rehefa avy teo, nanao iray ho an'i Amerika Avaratra aho.
Eoropa Andrefana (Espana, Alemaina, Italia, Angletera, sns)
ary Eoropa Atsinanana (Polona, Rosia, Okraina, sns)
Ny fahitàna ilay fanolorana naverina novolavolaina hifanaraka amin'ny taonjato faha-21 dia mampiseho antsika fa arakaraka ny fiovàn'ny vanim-potoana no mampijanona azy ho toy ny taloha. Angamba mety hanjavona ireo lapa, saingy hisy foana fianakaviana Lannister iray fatra-paniry laza sy fianakaviana Stark iray tranainy vonona hiady ho an'ny voninahitra. Hisy foana ireo zavatra sasany tahaka ireo mpanjakavavy miady amin'ireo mpandroba fahefana, ireo mpisafo tany, ireo mpamadika, ireo mpiady tsy mivadika, manao ny ataony noho ny fampanantenana hahazo fahefana maharevo.
Hatreto aloha, i Amerika sy Eoropa ihany no nanainga fanahy an'i Damien Bosio, saingy tsapany fa vao manomboka ny asany:
Mbola misimisy ihany ny tontolo tokony havadiko ho sary mivaingana, kanefa mieritreritra aho fa any Dubai no hamaranako izany. (Tiako i Dubai)
Mila miandry isika raha handia an'i Azia, Afrika ary i Oseania i Damian. Satria tokoa, ny sasany amin'ireo toerana tena izy ireo, sy ny tantarany, dia misy fifandraisany manjavozavo ihany amin'ireo vahoaka sy toerana noforonin'ny saina ao anatin'ilay tantara mitohy, tahaka ny Kaokazy sy ny Dothraki na koa ny avaratr'i Iraka sy ireo Zanaka lahy Faharoa, mandrahona ireo fanjakana izay nanipy azy ireo tanatin'ny fanilikilihana. Azo atao daholo ny zava-drehetra raha, mandritra ny fotoana fohy, mivadika ho ilay Goaika manana maso telo isika, dia ilay “vervoyant” farany.